कारबाही गरिनुपर्ने ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’लाई उल्टै २ अर्बकाे नयाँ ठेक्का ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
कारबाही गरिनुपर्ने ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’लाई उल्टै २ अर्बकाे नयाँ ठेक्का !
प्रकाशित मिति : आश्विन ७, २०७५ आईतबार
दर्जनौं ठूला पुल र सडककाे ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने र कम गुणस्तरका संरचना निर्माण गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले फेरि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी ठेक्का पाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय भवन निर्माणका लागि टेन्डरमा सहभागी १२ कम्पनीमध्ये सबभन्दा कम दररेट प्रस्ताव गर्ने पप्पु छानिने निश्चित भएको हो ।
पप्पु यसअघिदेखि नै ठेक्का ओगट्ने तर समयमा काम नसक्ने कम्पनीका रूपमा बदनाम छ । निर्माण गरिएको संरचना पनि गुणस्तरहीन रहेको गुनासो बढेपछि सरकारले छानबिनसमेत अघि बढाएको समाचार अाजकाेकान्तिपुरमा छ ।